Home » Vaovao momba ny fizahantany » Ahoana ny fomba hanodinan'ny ICAO ny sidina mankany amin'ny mahazatra vaovao
ICAO, ny masoivohon'ny UN misahana ny sidina manokana, dia hanana sekretera jeneraly vaovao, Andriamatoa Salazar. .e nifanakalo hevitra momba ny fomba fijeriny ny normal vaovao atrehin'ny fiaramanidina miaraka amin'ny COVID.
Ny Organisation Aviation Civile Internationale (ICAO) dia sampana manokana an'ny ONU tompon'andraikitra amin'ny fandrindrana ny ankamaroan'ity fizotrany ity.
Ny oniversite McGill dia nampiantrano webinarina ifandraisana miaraka amin'ny vahiny manokana, Juan Carlos Salazar, LLB, LLM (McGill), MPA (Harvard), ny sekretera jeneraly voafidin'ny ICAO.
Manam-pahaizana zokiolona amin'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina maneran-tany, ao anatin'izany Vijay Poonoosamy, Chair Aviation Group World Network Network , nanatrika.
Nandritra io hetsika io dia niresaka momba ny fahitany ny andraikitry ny ICAO amin'ny fitetezana ny fiaramanidina sivily ho amin'ny ara-dalàna vaovao Andriamatoa Salazar ary naka fanontaniana tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny mpanatrika.
Juan Carlos Salazar dia niditra tao amin'ny LLM an'ny IASL momba ny Air and Space Law tamin'ny taona 1998.
Ady vaksiny sy ny vokany eo amin'ny firenena ambany fidiram-bola